Anandamide VS CBD - ခင်ဗျားရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတာလဲ။
ပင်မစာမျက်နှာ > Anandamide VS CBD - ခင်ဗျားရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Anandamide VS CBD - ခင်ဗျားရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Anandamide (AEA) ဆိုတာဘာလဲ
Anandamide (AEA), Bliss မော်လီကျူးအဖြစ်လူသိများ, ဒါမှမဟုတ် N-arachidonoylethanolamine (AEA), တစ် ဦး ဖက်တီးအက်ဆစ် neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ Anadamida (AEA) ဟူသောအမည်ကို Joy“ Ananda” မှ Sanskrit မှဆင်းသက်လာသည်။ Raphael Mechoulam ဟူသောဝေါဟာရကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏လက်ထောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်သော WA Devane နှင့်LumírHanušတို့နှင့်အတူ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်“ Anandamide” ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Cannabidiol (CBD) ဆိုတာဘာလဲ။
Cannabidiol (CBD) သည်တွေ့ရပြီးဒုတိယအပေါများဆုံးတက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည် ဆေးခြောက် sativa (ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်လျှော်) ။ Tetrahydrocannabinol (THC) သည်အများဆုံးပျံ့နှံ့နေပြီးဆေးခြောက်စက်ရုံ၌တွေ့ရှိရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန most တရာယ်အများဆုံး cannabinoid ဖြစ်သည်။ THC သည်မြင့်မားသောခံစားမှုရရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
သို့သော် CBD သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ပါ။ THC ပမာဏအနည်းငယ်ပါသောလျှော်ပင်မှထုတ်ယူသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္CBတွင် CBD ကိုလူကြိုက်များစေခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Cannabidiol (CBD) ရေနံသည်လျှော်မျိုးစေ့ဆီသို့မဟုတ်အုန်းဆီကဲ့သို့သောသယ်ဆောင်သည့်ဆီသို့ထုတ်ယူထားသော CBD ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်ဆေးခြောက်စက်ရုံမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Anandamide & Cannabidiol မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Anandamideထို့အပြင် N-arachidonoylethanolamine ဟုလည်းလူသိများကြသောအက်မီဂါ -6 ဖက်တီးအက်စစ်၊ အက်စစ်အက်စစ်၏အက်စစ်မဟုတ်သောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမှဆင်းသက်လာသောဖက်တီးအက်စစ် neurotransmitter ဖြစ်သည်။ “ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ပျော်မွေ့ခြင်း” နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို Sanskrit စကားလုံး ananda မှခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦး နှောက်ဆဲလ်များတွင် cannabinoid receptors ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည့်အခန်းကဏ္ for အတွက်“ bliss molecule” ဟုခေါ်တွင်သော“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟော်မုန်း” ဟုခေါ်သည့် oxytocin နှင့် anandamide တို့အကြားပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုသည်သုတေသနဖြစ်သည်။
anandamide စိတ်လှုပ်ရှားစရာသို့မဟုတ် inhibitory လား?
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် CB1 အမျိုးအစား cannabinoid receptors များနှင့်သူတို့၏ endogeneneous ligand anandamide တို့သည်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်မှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်သည့်နေရာတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော neurotransmission ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ။
ကိုယ်ခန္ဓာသဘာဝအရထုတ်လုပ်သည့် endocannabinoids ၂ ခုသည်ဘာတွေလဲ
သုတေသီများကတတိယမြောက် cannabinoid အဲဒီ receptor ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ Endocannabinoids ဆိုတာကအဲဒီ receptor တွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကသဘာဝအလျောက်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။ ဤမော်လီကျူးများအကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်မှုအရှိဆုံးနှစ်ခုကို anandamide နှင့် 2-arachidonoylglycerol (2-AG) ဟုခေါ်သည်။
၎င်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ဦး တည်စေသောစက်ရုံအတွက်အမည်ပေးထားသည့် endogenous cannabinoid system သည်လူ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဇီဝကမ္မဗေဒစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Endocannabinoids နှင့်သူတို့လက်ခံသောအရာများကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်တွေ့ရသည်။ ဦး နှောက်၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောတစ်ရှူးများ၊ ဂလင်းများနှင့်ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များ၌ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် cannabinoid ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သနည်း
၁၉၉၂ တွင် Mechoulam ၏ဓာတ်ခွဲခန်းသည်ပထမဆုံး endocannabinoid ကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီး၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင် CB1992 receptor တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အဖြစ်ခွဲခြားထားသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို arachidonoyl ethanolamide အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး anandamide ဟုခေါ်သည်။
THC သည်ချောကလက်တွင်မတွေ့ပါ။ ၎င်းအစား anandamide ဟုခေါ်သော neurotransmitter အခြားဓာတုပစ္စည်းကိုချောကလက်တွင်သီးသန့်ဖယ်ထားပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ anandamide ကို ဦး နှောက်ထဲတွင်သဘာဝကျကျထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Anandamide ကို endocannabinoid လို့ခေါ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကိုငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလုပ်ပြီးဆေးခြောက်စက်ရုံမှာတွေ့ရတဲ့ cannabinoids ကိုတုပလို့ပဲ။ ထို့ကြောင့်ချောကလက်တွင်ပါဝင်သောအရာနှင့်ဆေးခြောက်စက်ရုံမှပါဝင်သောပစ္စည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ကိုယ်ပိုင်ဆေးခြောက် neurotransmitter system ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
ချောကလက်မှာ theobromine ရှိပါသလား
Theobromine သည်ကိုကိုးနှင့်ချောကလက်တွင်တွေ့ရသောအဓိက alkaloid ဖြစ်သည်။ ကိုကိုးမှုန့် theobromine ပမာဏ 2% theobromine ကနေ 10% ဝန်းကျင်အထိကွဲပြားနိုင်သည်။ နို့ချို့တဲ့ခြင်းထက်အမှောင်ထဲတွင်များသောအားဖြင့်ပိုမိုပါဝင်သည်။
အဓိက cannabinoids နှစ်ခုသည် delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) နှင့် cannabidiol (CBD) တို့ဖြစ်သည်။ ယင်းနှစ်ခုအနက်အများဆုံးအဖြစ်လူသိများသည် delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးခြောက်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
Anandamide သည်အနည်းငယ်မျှသာသိသော ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခန်းကဏ္ for အတွက်“ bliss molecule” ဟုခေါ်သည်။ ... ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
Anandamideဦး နှောက် cannabinoid CB1 receptors များအတွက် endogenous ligand သည်ဆေးခြောက်၏အဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုΔ9-tetrahydrocannabinol (THC) ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုထုတ်လုပ်သည်။
Endocannabinoids ။ Endogenous cannabinoids လို့လည်းခေါ်တဲ့ Endocannabinoids တွေဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်တဲ့မော်လီကျူးတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ cannabinoids နဲ့ဆင်တူပေမယ့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်ပေးတယ်။
CBD သည် dopamine တိုးသလား။
CBD သည် glutamate နှင့် dopamine neurotransmitter များထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုအားပေးရန် adenosine receptor ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ dopamine receptor များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်၎င်းသည် dopamine အဆင့်များကိုမြင့်တက်စေပြီးသိမြင်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကိုထိန်းညှိပေးသည်။
Indica သည် dopamine တိုးပွားစေသလား။
စူးရှသောနာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ညအချိန်တွင်အသုံးပြုရန် dopamine (ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုစင်တာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည့် neurotransmitter) ကိုတိုးစေသည်။
သကြားဓာတ်အပြင်ချောကလက်တွင်အခြား neuroactive မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးဖြစ်သောကဖိန်းနှင့်သီအိုဘရုန်းလည်းရှိသည်။ ချောကလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ opiate receptors များကိုလှုံ့ဆော်ပေးရုံသာမက ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်မှုစင်တာများတွင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ anandamide ဘာလုပ်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် homeand အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင်အသုံးပြုရန် anandamide on-demand ကိုဖန်တီးသည်။ Anandamide သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အာရုံခံဆဲလ်အချက်ပြခြင်းများကိုထိန်းညှိရန်ကူညီခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းကိုတီထွင်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ cannabinoid receptors CB1 နှင့် CB2 နှင့် THC ကဲ့သို့သော cannabinoids သည်အစာစားခြင်းအပေါ်တွင်မှီတည်သည်။
အဆိုပါ cannabinoid အဲဒီ receptor စနစ်ကဘာလဲ?
ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရှိသော Cannabinoid receptors များသည်အစာစားချင်စိတ်၊ နာကျင်မှု၊ ခံစားမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်စသည့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့် endocannabinoid စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Cannabinoid receptors သည် G ပရိုတိန်းနှင့်တွဲဖက်ထားသော receptor superfamily တွင်ဆဲလ်အမြှေးပါး receptors များဖြစ်သည်။
Anandamide ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ရှည်လျားသောကွင်းဆက် polyunsaturated fatty acids များ၏ amides, esters နှင့်အီများပါဝင်ပြီး D-9-tetrahydrocannabinol (THC) နှင့်အရေးပါသော pharmacophores များကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
သင်ဘယ်လိုသဘာဝ Anandamide အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သလဲ?
ဤအသီးများကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုစားပြီးသင်၏ anandamide အဆင့်တိုးမြင့်စေသောသင်၏ FAAH ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးပါ။ ချောကလက်သည် Anandamide ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်အခြားအစားအစာတစ်ခုဖြစ်သည်။ FAAH ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးသော ethylenediamine ခေါ်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်သည်။ နောက်တစူပါမားကက်သို့သွားသည့်အခါဤအစားအစာသုံးမျိုးကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။
ချောကလက်တွင် anandamide ပါဝင်ပါသလား
ချောကလက်တွင်သကြားဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။ သကြားဓာတ်အပြင်ချောကလက်တွင်အခြား neuroactive မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးဖြစ်သောကဖိန်းနှင့်သီအိုဘရုန်းလည်းရှိသည်။ ဦး နှောက်တွင်းရှိ opiate receptors များကိုချောကလက်ကလှုံ့ဆော်ပေးရုံသာမက ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာစင်တာများတွင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်ပေးသည်။
Theobromine သည်ကိုကိုးနှင့်ချောကလက်တွင်တွေ့ရသောအဓိက alkaloid ဖြစ်သည်။
ယခင် xantheose ဟုလူသိများသော Theobromine သည် cacao စက်ရုံ၏ခါးသော alkaloid ဖြစ်ပြီးဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ C7H8N4O2 နှင့်အတူ။ ၎င်းကိုချောကလက်၊ လက်ဖက်ပင်နှင့်သစ်သီးဝလံများအပါအ ၀ င်အခြားအစားအစာများစွာတွင်တွေ့ရသည်။
ချောကလက်က serotonin ကိုတိုးစေသလား။
သို့သော်ချောကလက်တွင် tryptophan ပါ ၀ င်သောကြောင့်ရလဒ်အနေဖြင့် serotonin တိုးများလာခြင်းကသူတို့၏ချောကလက်ကိတ်မုန့်တစ်လုံး (Serotonin) ကိုစားပြီးနောက်လူတစ် ဦး သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်မှု၊
Anandamide သည်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအားထိန်းညှိခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာမျိုးဆက်သစ်များအားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အပျော်အပါးတို့တွင်အဓိကကျသည်။ ဦး နှောက်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုနျူကလိယ accumbens သို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်း Anandamide သည်ကြွက်များ၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိစေသည်။ ထို့အပြင်အစာစားခြင်းကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
CBD သည် antioxidant လား။
THC နှင့် CBD များသည်အစွမ်းထက် antioxidants များဖြစ်သည်။ ဗီတာမင်စီနှင့်အီးတို့ထက် ပို၍ စွမ်းသည်။ အမေရိကန်အစိုးရ၏မူပိုင်ခွင့် 1999/008769 သည် neuroprotectant နှင့် cannabinoids ၏ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အထူးဖြစ်သည်။
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) သည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏အရေးပါသောအမြှေးပါးအင်ဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး endogenous အချက်ပြသည့် lipids များ၏ဖက်တီးအက်စစ် amide မိသားစုအား endogenous cannabinoid anandamide နှင့် sleep inducing ပစ္စည်း oleamide တို့ပါဝင်သည်။
CBD သည် Anandamide ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
ဇီဝဓာတုဗေဒလေ့လာမှုများအရ cannabidiol သည်အင်ဇိုင်းအက်ဆစ် amide hydrolase (FAAH) ကဓာတ်ကူပေးသော anandamide ၏ဆဲလ်ပျက်စီးခြင်းကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့် endogenous anandamide အချက်ပြမှုကိုသွယ်ဝိုက်တိုးစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
cannabinoid ဟူသောစကားလုံးသည်မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မူလပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်၏ cannabinoid receptors နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး Cannabis Sativa စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောအရာနှင့်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိသည်။ …အဓိက cannabinoids နှစ်ခုသည် delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) နှင့် cannabidiol (CBD) တို့ဖြစ်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်အိပ်စက်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်၊ နာကျင်မှုနှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်တုန့်ပြန်ခြင်းအပါအဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းညှိရာတွင်ပါဝင်သော endocannabinoid system (ECS) ဟုခေါ်သည့်အထူးပြုစနစ်တစ်ခုပါရှိသည်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ cannabinoid receptors ရှိသလား။
ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရှိသော Cannabinoid receptors များသည်အစာစားချင်စိတ်၊ နာကျင်မှု၊ ခံစားမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်စသည့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့် endocannabinoid စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ... 2007 ခုနှစ်တွင် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ G ပရိုတိန်း -coupled receptor GPR55 နှင့်အတော်ကြာ cannabinoids များ၏စည်းနှောင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
CBD anandamide တိုးမြှင့်ပါသလား?
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာထားသောကြောက်ရွံ့မှုစည်းမျဉ်းအပေါ် CBD ၏ cannabinoid receptor- မှီခိုသက်ရောက်မှုများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, CBD FAAH အားဖြင့်၎င်း၏ transporter -mediated ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းတားစီးအားဖြင့် anandamide အဆင့်ဆင့်တိုးပွားစေပါသည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ဘယ် cannabinoid ကိုအသုံးပြုသလဲ။
THC ပမာဏနိမ့်သောပမာဏနှင့် CBD ပမာဏကိုအလယ်အလတ်ထိုးသောပမာဏနှင့်အတူ Harlequin ၏ cannabinoid ပရိုဖိုင်းသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုစိတ်မဝင်စားသောစိုးရိမ်စိတ်တိုက်ဖျက်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်း၏အပေါများဆုံး terpene သည် myrcene ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီးအိပ်စက်ခြင်းအထောက်အကူအဖြစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
CBD သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုသည်။ အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရသောလူနာများအနေဖြင့် CBD သည်အိပ်ပျော်သွားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းတို့အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ CBD သည်နာတာရှည်နာကျင်မှုအမျိုးမျိုးကိုကုသရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အရက်သည်သက်သာစေသောဆေးဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်စေသည်။ အစတွင်အရက်သောက်ခြင်းသည်စိုးရိမ်မှုများကိုလျော့နည်းစေပြီးသင်၏ပြofနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားရှက်ရွံ့မှုနည်းစေခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်တိုးပွားစေခြင်းနှင့်သင့်အားယေဘုယျအားဖြင့်သက်သောင့်သက်သာခံစားစေနိုင်သည်။
စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ဆရာ ၀ န်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုမေးမြန်းကာသွေးစစ်ဆေးမှုကိုအကြံပြုသည်။ ၎င်းသည် hypothyroidism ကဲ့သို့သောအခြားအခြေအနေတစ်ခုသည်သင့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိ၊ သင်သောက်နေသည့်မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုဆရာ ၀ န်ကမေးမြန်းလိမ့်မည်။
(ထိုကဲ့သို့သော fluoxetine, သို့မဟုတ် Prozac ကဲ့သို့) စိတ်မကျဆေး Antidepressants
အိပ်ငိုက်စေနိုင်သောဆေးများ (antipsychotics, benzodiazepines)
Macrolide ပantibိဇီဝဆေး (erythromycin, clarithromycin)
CBD သည် dopamine ကိုထုတ်ပေးပါသလား။
အဘယ်သို့သော dopamine နည်းပါးသည်ကိုခံစားရသနည်း
အချို့သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့် dopamine ချို့တဲ့မှုရောဂါလက္ခဏာများတွင်ကြွက်တက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်တုန်ခါခြင်းများပါဝင်သည်။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း။ ကြွက်သားထဲမှာတောင့်တင်း။
ကဖိန်းဓာတ်က dopamine အဆင့်ကိုတက်စေသလား။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောစိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးဖြစ်သောကဖိန်းဓာတ်သည်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်နှင့်နိုးကြားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားနိုးကြားမှုမြှင့်တင်စေသောဆေးများ (stimulants နှင့် modafinil) ကဲ့သို့ပင်ကဖိန်းဓာတ်သည် ဦး နှောက်တွင် dopamine (DA) အချက်ပြမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Velvet Beans ကိုစားပါ
CBD သည် serotonin ကိုမြှင့်ပါသလား။
CBD သည် serotonin အဆင့်ကိုသေချာပေါက်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းသင့် ဦး နှောက်၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ receptors များကသင့် system ထဲတွင်ရှိပြီးဖြစ်သော serotonin ကိုမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဦး နှောက်အတွင်းရှိဤ receptors များအပေါ် CBD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေသည်။
CBD သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
သုတေသီများက CBD ၏ endocannabinoid system နှင့်အခြား ဦး နှောက်အချက်ပြစနစ်များတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများရှိသူများအတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် CBD အတွက်လေ့လာမှုအများဆုံးမှာဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါကဲ့သို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်အတွက် ၀ ယ်ဖို့အကောင်းဆုံး CBD ဆီကဘာလဲ။
Anandamide သည် CB1 receptors ၏ endogenous ligand အဖြစ်လုပ်ဆောင်သော lipid ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား receptors လည်း ann9-tetrahydrocannabinol, Cannabis sativa အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ pharmacological သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိအဓိကမော်လီကျူးပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။
သင် anandamide ကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ
၎င်းကို N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine မှနည်းလမ်းများစွာကိုဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းကို Anandamide ကို Ethanolamine နှင့် Arachidonic အက်ဆစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသော fatty acid amide hydrolase (FAAH) အင်ဇိုင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ပျက်စီးစေသည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် CBD ထုတ်လုပ်သလား။
သို့သော်သင်သတိမပြုမိသောအရာမှာ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်း၏ endogenous cannabinoids ထုတ်လုပ်သောအချက်အလက်များမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် CBD သည်ကင်ဆာကိုကုသသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ CBD သည်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါများ၊ fibromyalgia နာကျင်မှု၊ နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကြွက်သား spasticity နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းအလယ်အလတ်အထောက်အထားများရှိသည်။ ဒေါက်တာလီဗီက“ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သမျှအကျိုးအရှိဆုံးကတော့အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုကုသပေးခြင်းဖြစ်တယ်။
CBD အသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မကြာခဏကောင်းကောင်းခံနိုင်သော်လည်း CBD သည်ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်လျော့ခြင်း၊ CBD သည်သင်သောက်သောအခြားဆေးဝါးများနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
CBD သည် ဦး နှောက်ကိုဘာလုပ်သနည်း။
ဤအရည်အချင်းများသည် CBD ၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းညှိပေးသည့် neurotransmitter အတွက် ဦး နှောက်၏ receptors များအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ CBD ကိုအသုံးပြုခြင်းအကျဉ်းနှင့်လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုလျှော့ချရန်ပြသခဲ့သည်။
CBD သည်သင်၏စနစ်တွင် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်ကြာသည်။ သို့သော်ထိုအကွာအဝေးသည်လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သူများအတွက် CBD သည်သူတို့၏စနစ်တွင်ရက်သတ္တပတ်များစွာနေနိုင်သည်။
Anandamide သည် ဦး နှောက်၏နေရာများတွင်မှတ်ဥာဏ်၊ အတွေးဖြစ်စဉ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုတို့တွင်အရေးကြီးသောအင်ဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သုတေသနပြုချက်အရ anandamide သည်အာရုံကြောဆဲလ်များအကြားရေတိုဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်နှင့်ချိုးဖောက်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
anandamide တစ် ဦး cannabinoid လား?
N-arachidonoylethanolamine (AEA) လို့လည်းခေါ်ပြီး anandamide ဟာ THC လို cannabinoids နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ CB receptors တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ CB receptor များအတွက် signal messenger အဖြစ်အလုပ်လုပ်သော neurotransmitter နှင့် cannabinoid-receptor binding agent ဖြစ်သည်။
(1) .Mallet PE, Beninger RJ (1996) ။ "ဒီ endogenous cannabinoid အဲဒီ receptor agonist anandamide ကြွက်များတွင်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း" ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။7(3): 276-284
(2) .Mechoulam R ကို, Fride အီး (1995) ။ "ဒီ endogenous ဦး နှောက် cannabinoid ligands, အ anandamides ဖို့ခင်းကျင်းသောလမ်း" ။ Pertwee RG (ed ။ ) ၌တည်၏။ Cannabinoid အဲဒီ receptors ။ ဘော်စတွန် - ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း။ စစ။ 233-
(၃) .Rapino, C ။ ; Battista N .; ဘာရီ, M ။ ; Maccarrone, အမ် (3) ။ "Endocannabinoids လူ့မျိုးပွား၏ biomarkers အဖြစ်" ။ လူ့မျိုးပွား update ကို။ 2014 (20): 4-501 ။
(4) ။(2015) ။ Cannabidiol (CBD) နှင့်ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်များ - ရောင်ရမ်းခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ဇီဝအော်ဂဲနစ် & ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ, 23 (7), 1377-1385.
(5) .Corroon, ဂျေ, & Phillips က, ဂျာ (2018) ။ Cannabidiol အသုံးပြုသူများကိုတစ် ဦး က Cross- ပုဒ်မလေ့လာမှု။ ဆေးခြောက်နှင့် cannabinoid သုတေသန,3(1), 152-161 ။
(6) ။ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဗဟိုဌာန (၂၀၂၀) ။ CID 2020, Cannabidiol အတွက် PubChem Compound Summary ။ မှအောက်တိုဘာလ 644019, 27 ရယူရန် .
(၇) .R de Mello Schier, အေ၊ P de Oliveira Ribeiro, N. , S Coutinho,,, Machado, အက်စ်, Arias-Carrión, O. , တစ် ဦး Crippa, ဂျေ, ... & C Silva, A ။ (7) ။ ဆေးခြောက်နှင့် anxiolytic ကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ဆေးခြောက်ဓာတုဒြပ်ပေါင်း (Cannabis sativa) ။ CNS & အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ - မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်မှတ်များ (ယခင်ကလက်ရှိဆေးဝါးပစ်မှတ်များ - CNS & အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ), 2014 (13), 6-953 ။
(8) .Blessing, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, ဂျေ, & Marmar, CR (2015) ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ် Cannabidiol ။ Neurotherapeutics: စမ်းသပ် NeuroTherapeutics များအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဂျာနယ်, 12(4), 825-836 ။
(9) ။Anandamide (AEA) (၉၄၄၂၁-၆၈-၈)
(10) ။egt စူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီး။
(11) ။Oleoylethanolamide (oea) - သင့်ဘ ၀ ရဲ့မှော်အရိပ်
(13) ။မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ: အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
(14) ။Palmitoylethanolamide (ပဲ): အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အသုံးပြုမှု, ဖြည့်စွက်။
(15) ။resveratrol ဖြည့်စွက်၏ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို6။
(16) ။phosphatidylserine (ps) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(17) ။pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(18) ။alpha gpc ၏အကောင်းဆုံး nootropic ဖြည့်စွက်။
(19) ။Nikotinamide mononucleotide (nmn) ၏အိုမင်းခြင်းကိုခံသောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်။
ချောကလက်ရှိ Anandamide သည်အမှန်တကယ်စုပ်ယူနိုင်သော်လည်းချက်ချင်းပျက်သွားသောကြောင့်အများအားဖြင့်အသုံးမ ၀ င်ပါ။
ထိတ်လန့်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုလျှော့ချရန် anandamide ၏အလယ်အလတ်ထိုးဆေးသည် CB1 ကိုသက်ဝင်စေသည်။ သို့သော်မြင့်မားသောဆေးများသောက်သောအခါ anandamide သည် anandamide ၏ anxiolytic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတန်ပြန်စေသော TRPV1 ion channel ကိုစတင်အသက်သွင်းခဲ့သည်။
၎င်းကို“ biphasic” သို့မဟုတ်“ U-shaped” ဆေးတုန့်ပြန်မှုဟုခေါ်သည်။
Anandamide ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ထုတ်လုပ်ပြီး THC နှင့် CBD ကိုအပင်များတွင်ထုတ်လုပ်သည်။
နွေ ဦး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောချင်တယ်။ သင့်ရဲ့ post ကိုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုးရှင်းအေးမြခြင်းနှင့်သင်ဤဘာသာရပ်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြောင်းငါထင်နိုင်ကြောင်း။ ကောင်းပြီမင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူမင်းရဲ့ RSS feed ကိုကိုင်တွယ်ခွင့်ပြုပါစေတော့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
CBD သည် FHAA အား Anandamide ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်တားဆီးပေးပြီး၎င်းသည်သိသာသောစိုးရိမ်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေသည်။
ငါ Anandamide ကိုယ်တိုင်ကနေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြတဲ့အရာအနည်းငယ်ကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ တစ်စုံတစ် ဦး က Theobroma Caocao ထုတ်ယူမှုကိုယူပြီးပျော်ရွှင်မှုသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့လည်းဖတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါထို့နောက်သို့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။
ခန်ဓာကိုယ်၌သီးခြား cannabinoid receptors နှစ်ခုရှိသည်။ CB1 နှင့် CB2 ။ THC သည် CB1 အပေါ် agonist တစ် ဦး အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး dopamine ကိုပိုးမွှားစေသည်။
THC နှင့် CBD တို့သည် phytocannabinoids များဖြစ်ပြီး anandamide သည် endogenous cannabinoid (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သည်) ။
THC သည် CB1 နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းသည်အင်ဇိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဒုတိယ messenger ကိုသက်ဝင်စေမည့် G-Protein Coupled receptor ကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဤ GPCRs များ၏ရလဒ်သည်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အေးဆေးခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေခြင်းစသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းသည် Rube Goldberg ကိရိယာကဲ့သို့စဉ်းစားရန်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည် - THC သည် CB1 receptor နှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်၊ ၎င်းသည် GPCR ကိုအခြားလုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုသက်ဝင်စေသော GPCR ကိုသက်ဝင်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်တိကျသော cannabinoid receptors, CB1 နှင့် CB2 receptors ရှိသည်။ ၄ င်းသည်သဘာဝအားဖြင့် endocannabinoids ဖြစ်စေ၊ ဓာတုဖြစ်စေ၊ သဘာဝအရဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်သည်ဖြစ်စေ CB1 receptors သည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသတင်းပို့သူများကိုတားစီးစေသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ neurotransmitter GABA ဖြစ်ပြီး dopamine ထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးပေါင်းပင်မှသင်ခံစားရသည့်အမြင့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုပေးသည်။ ဒီ receptors နှစ်ခုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ cannabinoids ရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ များစွာသော cannabinoids တွေအတွက်လည်းစည်းနှောင်မှုနှောင်ကြိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကောင်းစွာလေ့လာထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ novel receptors အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။